Mmadụ nwere ike biko gwa m otú nyefee Ndi ana-akpo na foto site na m Sony Xperia Z ka ọhụrụ m iPhone 6s? M ga-apprieciate niile enyemaka m nwere ike inwe, m nwere nnọọ ọtụtụ dị mkpa faịlụ na m Sony Xperia Z nke m na-achọghị ida.
Enweta ihe iPhone, dị ka iPhone 6s Plus ma ọ bụ iPhone 5s, ma ugbu a-emecha na-achọ ihe ngwọta nyefee kọntaktị site na Sony Xperia ka iPhone? Ọ bụghị ike dị ka ị na-eche nke. Ebe a, m depụta pụta 2 ngwọta dị mfe nke ga-enyere ị nyefee Sony Xperia kọntaktị na iPhone effortlessly, n'agbanyeghị na ha na-echekwara na ebe nchekwa ekwentị gị ma ọ bụ akaụntụ.
Method 1: Nyefee kọntaktị site na Sony Xperia ka iPhone na 1 click
Method 2: Nyefee VCF faịlụ site na Sony Xperia ka Google na mmekọrịta ka iPhone
Nyefee Sony Xperia kọntaktị na iPhone na adreesị ozi-e, ụlọ ọrụ aha na ndị ọzọ Ama.
Nyefee na kọntaktị ma na ebe nchekwa ekwentị na na akaụntụ, dị ka Google Facebook, Twitter, wdg
Tọghata na-akpali ọdịyo na video si Sony Xperia ka iPhone
Detuo photos, kalenda na ozi ederede site na Sony Xperia ka iPhone.
1-pịa transfer, na-enweghị àgwà ọnwụ.
Akwado Sony Xperia ngwaọrụ na-agba ọsọ Android 2.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 5 / 4S / 4 / 3GS dabeere iOS 9/8/7/6/5.
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare MobileTrans na kọmputa gị
Download Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Na-eche na wụnye ya. Ọ bụ virus-free softwware. Mgbe ahụ, malite ya na kọmputa gị. Ị ga-ahụ bụ isi window dị ka ndị a. Mgbe ahụ, jikọọ gị Sony Xperia na gị iPhone na kọmputa gị karị.
Nzọụkwụ 2. Kwado na "Phone Nyefee" atụmatụ
Mgbe preparatory ọrụ dị njikere, pịa "na ekwentị ekwentị Nyefee" na isi window, na ọ ga-eduzi gị ebe a: ma ngwaọrụ gị na-egosipụta dị ka isi iyi na ebe iche iche. Jide n'aka na gị iPhone bụ ebe otu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwere ike ịgbanwee ebe ndị nke gị ntị site na ịpị "tụgharịa".
Nzọụkwụ 3. Paghaa kọntaktị site na Sony Xperia ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5/4 / 4S / 3GS
The ọdịnaya Ịnwere ike ịnyefe na-depụtara na n'etiti window. Site ndabara, niile ọdịnaya na ike ga-agafere na-enyocha. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ịkwaga Sony Xperia kọntaktị na iPhone, biko uncheck ndị ọzọ faịlụ. Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy" na-amalite na kọntaktị nyefe.
Method 2: Nyefee VCF faịlụ site na Sony Xperia ka Google na mmekọrịta ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji ihe ọ bụla software na otu akaụntụ, dị ka Google, ị nwere ike mbupụ kọntaktị dị ka ihe VCF faịlụ na bulite na akaụntụ. Mgbe ahụ, mmekọrịta na akaụntụ na gị iPhone.Here, m na-Google akaụntụ dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. On gị Sony Xperia ekwentị, mgbata Ndi ana-akpo ngwa. Mgbata Ndi ana-akpo taabụ.
Nzọụkwụ 2. mgbata bọtịnụ ekpe ndị n'ụlọ bọtịnụ. Họrọ Import / Export> Export ka USB Nchekwa ma ọ bụ Export ka SD kaadị. The VCF faịlụ a ga-aha dị ka 00001.vcf, 00002.vcf, 00003.vcf na-aga na ..
Nzọụkwụ 3. Ugbu a, jikọọ gị Sony Xperia na kọmputa na ugwu ya dị ka ihe mpụga ike mbanye. Emeghe ya SD kaadị nchekwa na mbupụ na VCF faịlụ ka kọmputa.
Nzọụkwụ 4. abanye n'ime gị Gmail. Pịa Ndi ana-akpo na-egosi na kọntaktị window. Pịa Ọzọ. Na ya dobe ala menu, họrọ Import ....
Nzọụkwụ 5. Na mmapụta window, pịa Họrọ File na mbubata chọrọ VCF faịlụ.
Nzọụkwụ 6. y'otú iPhone na mgbata Setting> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye akaụntụ ...> Ndị ọzọ> Tinye CardDAV akaụntụ. Tinye nkesa, na aha njirimara na paswọọdụ. Enweta Next ịrụcha ntọlite.
Nzọụkwụ 7. Open kọntaktị ngwa gị iPhone na kọntaktị na-akpaghị aka synced.
Ọzọ Nchọpụta nsogbu eduzi maka iPhone i nwere ike
Speed ​​Up iPhone na-agba ọsọ iOS 8 Fast
3 Ụzọ Iweghachite iPhone SMS
3 Ụzọ nyefee Old iPhone ka iPhone 6
A Full Guide nyefee Android ka iPhone 6
Otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka Android
iOS 8 Nsogbu na Ngwọta n'ihi na Ị
Olee otú bubata kọntaktị iPhone ka Mac
Otú nyefee Music, SMS, Video, Photos na Ndi ana-akpo si Nokia ka Sony
10 Best iPhone Photo-ebi Bipute High Quality Photos si iPhone
> Resource> iPhone> 2 ụzọ nyefee Ndi ana-akpo si Sony Xperia ka iPhone